Xeerka saddex daloolow: maxaad u baahan tahay inaad ogaato si aad u maamusho | Abuurista khadka tooska ah
Waa inaan lagu jahwareerin sharciga seddex meelood ee loogu talagalay waxyaabaha la xiriira adduunka quusitaanka, iyo isla muddadaas, laakiin diiradda la saarayo ururka militariga. Halkan waxaynu u soconaa barta dhexe ee maqaalkan, oo la xidhiidha naqshadeynta iyo wax kasta oo xidhiidh la leh dunida fanka ballaadhkeeda oo dhan; xitaa waxaan ku ciyaarnaa luuqadaha barnaamijyada, barnaamijyada, iyo siyaabo kala duwan si loo siiyo aqoonsi weyn si loo noqdo hal abuur.
Xeerka seddex meelood sidii aan maalmo ka hor ula kulanay Saamiga Dahabka iyo adeegsiga taliye si loo helo saamiga ugu "qurxoon" indhaha daawadayaasha waa a tilmaamaha ku habboon habka sameynta sawirrada muuqaalka ah, sida naqshadaha, filimada, sawirada iyo sawiro. Sidan oo kale, waxaan awood u yeelan doonnaa saldhig aan ku dhejino walxaha kala duwan si si caqli leh loogu dhajiyo khadadkaas iyo isgoysyadooda.
1 Xeerka seddex meelood
2 Faahfaahinta qaar in lagu xisaabtamo marka la curinayo
3 Waa maxay taariikhda xukunka seddex meelood meel?
4 Tababarku wuxuu sameeyaa awood
5 Xeerka seddex meelood ee sawir qaadista
Xeerka seddex meelood
Qof kasta oo difaaca xeerkan seddexaad, inta badan wuxuu ku tilmaamaa a Qaab fiican oo lagu waafajin karo mawduucyadaas kuwaas oo awood u leh inay abuuraan xiisad dheeri ah, tamarta iyo xiisaha halabuurka marka loo eego diiradda saarista mawduuca.
Una sawir qaadista waxay u adeegtaa tusaalaha ugu fiican ee si dhakhso leh loo muujiyo bilowgii xeerkan. Waxaan ku leenahay qorrax dhaca sawirka oo leh geed noqon lahaa mowduuca ugu muhiimsan ee sawirka, laakiin taasi wax yar ayaa looga tagay dhanka midig si loo gaaro halabuur wada noolaansho ka weyn, haddii ay ahaan laheyd bartamaha qabashada.
El jiifku wuxuu ku fadhiyaa khadka toosan ee u qaybinaya qaybta saddexaad sawirka labada qaybood ee kore. Geedku wuxuu ku saleysan yahay danta labada sadar, oo loogu yeeri karo barta xiisaha sawirka. In kasta oo ay tahay in la sheego in qodobkani uusan taaban mid ka mid ah sadarradaas si looga faa'iideysto xukunka saddex-daloolow.
Faahfaahin kale waa qaybta ugu iftiinka badan cirka oo u dhow cirifka, halkaas oo qorraxdu ay dhowaan dhici doonto, laakiin toos uma aado mid ka mid ah sadarradaas, in kasta oo ay ku dhowdahay isgoyska laba sadar, ayaa ku filan si aan uga wada hadalno sharcigan oo aan si fiican ugu fahamno muuqaal ahaan.
Waxaan dhihi karnaa qaanuunkan waxay hubisaa inaan fahamno habka ugu wanaagsan ee loo sameeyo sawir muuqaal ah. Halkii aad diiradda saari lahayd mowduuca, wax yar iskaga tag, si astaamaha intiisa kale ay u yeeshaan door yar oo ay u awoodaan inay iswaafajiyaan si qaab ah qabashada ama nashqadeynta ay u qaadato daacadnimo weyn. Sawirada muuqaalka muuqaalka muuqaalka guud ayaa sida ugu fiican tusaale u ah markaan isticmaalno sharciga seddex meelood meel.
Kaliya waa inaad fiirisaa inta badan barnaamijyada kamaradaha casriga ah, si aad u ogaato inaan annagu nahay u oggolow inaad dhigto seddex-meelood saddexda xarig si aad u hesho hage si ay noogu fududaato markaynu sawiro qaadaneyno.
Faahfaahinta qaar in lagu xisaabtamo marka la curinayo
Qodob kale oo muhiim ah ayaa ah ku toosin mawduuca khadadka hagaha iyo barta isgoyskooda, inaad uga tagto jihada sare ama khadka hoose. Waxaan u daynaynaa saddex meelood laba meelood cirka, ama saddex meeloodow meel cirka markaan ka dhiseyno muuqaal dusha sare ah.
Sababta ugu weyn ee jiritaanka xukunka seddex meelood ayaa ah ka saar mawduuca bartamaha, ama ka horjoogso jadwalka inuu u qaybiyo sawirka laba si siman. Iyadoo tan maskaxda lagu hayo, waxaan si dhakhso leh ugu sii fiicnaan karnaa sharcigan oo aan ku dabaqi karnaa shaqooyin aan dhammaad lahayn oo loogu talagalay wax kasta oo lagu sameeyo naqshadeynta, farshaxanka, sawir qaadashada iyo waxyaabo kale oo badan. Sidoo kale, anagoo maskaxda ku hayna qaanuunkan, waxaan eegi karnaa sawirada shaleemooyinka filimaanta badan ee xisaabta ku darsada sedex meelood meel kale.
Haddii aan ku jirno kiiska oo aan sawir ka qaadno qof, waxa caadiga ah waa in la isku waafajiyo qaybta kore ee jirka si xarriiqdu u taagan tahay iyo indhaha qofka ee xariijin jiifa.
Waa maxay taariikhda xukunka seddex meelood meel?
Nos waa inaan tagnaa 1797 si aan ula kulanno John Thomas Smith. Buugiisa "Remarks on Mural Scenery", ninkani waxa uu soo xiganayaa shaqo uu qabtay Sir Joshua Reynolds, taas oo uu kaga hadlayo ereyo cusub oo cusub oo la xidhiidha iftiinka madow ee rinjiyeynta. Halkaan ayay Smith ku bilaabaysaa fikradda xukunka seddex meelood si maanta ay u tahay wax caadi ka ah shaqooyin badan.
Waxaan usii gudbi karnaa falsafada anagoo guda galayna ereyada ay kuhadlaan Reynolds wuxuu ka hadlayaa labo nal oo kala duwan oo isku mid ah oo aan waligood isla muuqan doonin. Waxa la rabo inay ahaadaan ayaa ugu muhiimsan inta kalena "ka hooseeya", cabir ahaan iyo shahaado ahaanba. Qaybaha aan sinnayn iyo shahaaddooyinkooduba waxay si fudud toos ugu jeedinayaan feejignaanta qayb ilaa qayb, halka qaybo ka mid ah isla muuqaalka lagu hakiyay qaab yaab leh.
Fikradaha qaar in waxay bilaabeen inay rimaan xukunka seddex meelood iyo in si heer sare ah loo isticmaalo by fanaaniin badan. Fikrad aasaasi ah oo farshaxan ah iyo mid ay tahay in si aan caadi ahayn loo hibeeyo si shaqooyinkeennu u yeeshaan macno kale, halkii aan u sii jeedin lahayn hal-abuurnimo ama hal-abuur ka soo bixi kara farshaxankeenna.
Tababarku wuxuu sameeyaa awood
Iyadoo la raacayo aasaaskan xukunka saddex-meelood, waxaan awoodnaa si fudud u dejisan in maalinteenna maalin si ay u ogaadaan in sawirada in aan qaadanno, waxay bilaabayaan inay weynaadaan macno ahaan waxayna awoodaan inay isku amaahiyaan inay muujiyaan wada noolaanshaha ka jiri kara muuqaalkaas aan qaadanay. Si tartiib tartiib ah ayaan u dhisi doonnaa annaga oo aan inta badan ogaanaynin inaan u adeegsanayno qaanuunka shaqooyinka intiisa badan, gaar ahaan markaan rabno inaan uga tagno mawduuca asalka oo aan u oggolaanno walxaha kale inay awoodaan inay siiyaan macno badan.
Waxay u muuqan doontaa nacas marka hore, laakiin mustaqbalka fog waxaan si fiican u fahmi doonnaa aasaaska falsafada iyo iswaafajinta ee ku jira sharcigan. Waxaan sidoo kale fahmi karnay in xeerarka loo sameeyay in lagu jebiyo, laakiin siday doonto ha noqotee, runtu waxay tahay inay jiraan farshaxanno fara badan oo na tusaya farshaxanadooda in xaalku aanu sidaa ahayn. Waxaan marwalba nafteena siin karnaa xorriyadda aan wax ku abuuri karno si xor ah, laakiin xariiqyadan ayaa naga caawin kara daqiiqado gaar ah si aan u aragno aragtidaas aan ugu baahanahay halabuurka ugu dambeeya. Waxay yihiin aalado, dhamaadka maalinta, oo aan gacanta ku hayno si aan u awoodno inaan ku xallinno dhammaan noocyada dhibaatooyinka, iyo, wixii ka sarreeya, marka hal-abuurka ugu badan ee farshaxankeennu uusan u soo gargaarin.
Xeerka seddex meelood ee sawir qaadista
Awoodda weyn ee aan gacanta ku heyno awgood inta badan taleefannada casriga ah ee ku soo qulqulaya suuqa, sharcigan aasaasiga ah wuxuu u taagan yahay midka ugu weyn ee lagu soo qaado sawirada quruxda badan. Sawirada dusha sare, waxa caadiga ah waa in la dhigo cirifka dhexda halabuurka, sidaan horay ugu soo sheegnay qaladka inbadan badiyaa sameeya. Waxa ay tahay inaad sameyso ayaa ku dhejinaya jihada mid ka mid ah labada xariijin ee jiifka ah. Muuqaal kale oo la tixgelinayo waa in lagu daro shay qaadi kara masraxa sawirka. Waxay noqon kartaa geed dusha sare ah si loogu dhejiyo xukunka seddex meelood.
Horaan u idhi taas dadka waa in la dhigaa banaanka mid ka mid ah dhinacyada looxyada. Tani waxay fureysaa meeshaas ballaaran waxayna muujineysaa hareeraha mawduuca, taas oo ka dhigeysa sawirka mid qurux badan haddii aan ogaanno sida si wanaagsan loogu dabaqo sharcigan. Sawir gacmeed, waxay noqon doontaa qadka toosan ee indhaha qofka la sawiray ee ay tahay in la dhigo mid ka mid ah labada sadar ee taliyaha.
Khiyaanada kale ee sawir qaadashadu waa haddii aan fiirineyno shay aad u dheereeya oo sawirka u kala qeybin kara labo, way ka fiican tahay u dhaqaaji wax yar dhinacyada mid ka mid ah si aysan ugu dhaaran khadadka midkood toosan oo ka tag, mar kale, booskaas bannaan ee ka dhigaya sawir "neefsasho."
Sawirada maadooyinka dhaqaaqaya, waa inaad si dhow u fiirisaa halka ay u dhaqaaqayaan, in laga tago booskaas furan oo awood u leh inuu sawiro dariiqa ay u mari doonto si haboon oo aan kadis lahayn.
Had iyo jeerna, waxaan ku heli doonnaa barnaamijyada tafatirka awood u leh in la gooyo sawirka si loo daboolo xukunka seddex meelood iyada oo aan dhibaato weyni jirin. Qaar ka mid ah barnaamijyada ugu caansan, sida Adobe Photoshop iyo Lightroom, waxay leeyihiin aaladaha dalagyada ee lagama maarmaanka u ah inay si fiican u waafajiyaan maadada iyada oo ku saleysan wax kasta oo kor lagu soo sheegay oo ay ka tarjumayaan saldhiggaas si fiican.
Xusuusnow in qaanuunkaan marwalba lagu dabakhi doono xaalad kasta, xittaa si caqligal ah iyo hal-abuur ahaan u jabiya, awood u leh waxay keeneysaa sawir daandaansi ah oo siiya dareenno kale ka duwan waxa ay noqon lahaayeen haddii aan isticmaalno xukunka saddex daloolow.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Sawir » Xeerka sedex meelood
Mar kasta oo aan arko maqaal xiiso leh oo ku saabsan halabuurka, kan oo kale, tusaalayaashu way i fashilmaan ... Taas ayaa igu hoggaamineysa inaan la yaabanahay bal inaad fahmayso ama aad fahmi weydo xeerka aad sharraxayso ...
Maqaal wanaagsan! Maaha wax badan tusaalooyinka!